Thintela ukuBika ngePhasiwedi
Ukuthatha amanyathelo athile anokuthintela ukubonwa kweephasiwedi zakho ezibalulekileyo. Iphasiwedi yenkqubo enye ihlala ilingana neepaswedi kwezinye iinkqubo ezininzi kuba abantu abaninzi basebenzisa iipaswedi ezifanayo kwinkqubo nganye abayisebenzisayo. Ngesi sizathu, unokufuna ukuthathela ingqalelo abasebenzisi ukuba benze iipassword ezahlukeneyo zeenkqubo ezahlukeneyo, ngakumbi kwiinkqubo ezikhusela ulwazi olubuthathaka ngakumbi.
Icala elisezantsi koku kukuba abasebenzisi kufuneka bagcine iiphasiwedi ezininzi kwaye, ngenxa yoko, banokuhendeka ukuba bazibhale phantsi, ezinokuphikisa naziphi na izibonelelo.
Ukugcinwa kwamagama agqithisiweyo
Ukuba kuya kufuneka ukhethe phakathi kweephasiwedi ezibuthathaka ezinokuthi zikhunjulwe ngabasebenzisi bakho kunye neepassword ezomeleleyo ekufuneka zibhalwe phantsi ngabasebenzisi bakho, abafundi babhale phantsi ipassword kwaye bagcine ulwazi ngokukhuselekileyo. Qeqesha abasebenzisi ukugcina iiphasiwedi zabo ezibhaliweyo kwindawo ekhuselekileyo- hayi kwiibhodi yezitshixo okanye kwiifayile zekhompyuter ezikhuseleke ngokulula. Abasebenzisi kufuneka bagcine iphasiwedi ebhaliweyo kwezi ndawo:
Ikhabhinethi yefayile evaliweyo okanye iofisi ekhuselekileyo
I-encryption epheleleyo (epheleleyo) yediski enokuthintela umntu ongenayo ukuba angene kwi-OS kunye neepassword ezigcinwe kwinkqubo.
Isixhobo esikhuselekileyo sokulawulwa kwephasiwedi njenge
Iphasiwedi ikhuselekile , Isoftware yomthombo ovulekileyo ekuqaleni eyenziwe nguCompterpane
Imigaqo-nkqubo yegama eligqithisiweyo
Njengomgculeli wokuziphatha, kuya kufuneka ubonise abasebenzisi ukubaluleka kokufumana iiphasiwedi zabo. Nazi ezinye iingcebiso zendlela yokwenza oko:
Bonisa indlela yokwenza iiphasiwedi ezikhuselekileyo. Bhekisa kubo njenge Amagama agqithisiweyo kuba abantu bakholisa ukuthatha amaphasiwedi ngokoqobo kwaye usebenzise kuphela amagama, anokukhuseleka kancinci.
Bonisa okwenzekayo xa kusetyenziswa iipassword ezibuthathaka okanye kwabelwana ngeepassword.
Ngenkuthalo yakha ulwazi lomsebenzisi kuhlaselo lobunjineli kwezentlalo.
Nyanzelisa (okanye ubuncinci ukhuthaze ukusetyenziswa) komgaqo-nkqubo wokuyila owomeleleyo oquka ezi ndlela zilandelayo:
Sebenzisa oonobumba abakhulu nabancinci, oonobumba abakhethekileyo kunye neenombolo. Ungaze usebenzise amanani kuphela. Ezo passwords zinokuqhekeka ngokukhawuleza.
Amagama aphosakeleyo okanye yenza amagama asezantsi kwisicatshulwa okanye isivakalisi. Umzekelo, I-ASCII sisishunqulelo segama IKhowudi eMiselweyo yaseMelika yoTshintshiselwano ngoLwazi Ingasetyenziswa njengenxalenye yegama eligqithisiweyo.
Sebenzisa iziphumlisi ukwahlula amagama okanye izifinyezo.
Guqula amagama agqithisiweyo rhoqo emva kweenyanga ezi-6 ukuya kwezili-12 okanye kwangoko ukuba bayakrokrelwa ukuba bayafakwa. Nantoni na rhoqo iphinda yazise ukuphazamiseka okusebenzela kuphela ukudala ubungozi.
Sebenzisa amagama okugqitha ahlukeneyo kwinkqubo nganye. Oku kubaluleke ngakumbi kubaphathi beziseko zenethiwekhi, ezinje ngeeseva, ii-firewalls, kunye nee-routers. Kulungile ukusebenzisa iiphasiwedi ezifanayo - zenze zahluke kancinane kuhlobo ngalunye lwenkqubo, enje IhloboInTheSouth-Win7 Iinkqubo zeWindows kunye neLinux + NguyUkuInTheSouth yeenkqubo zeLinux.
Sebenzisa amagama agqithisiweyo anobude obuguquguqukayo. Eli qhinga linokuphosa abahlaseli kuba abayi kubazi ubuncinci obufunekayo okanye ubuninzi beephasiwedi kwaye kufuneka bazame konke ukudityaniswa kobude begama eligqithisiweyo.
Sukusebenzisa amagama esitsotsi okanye amagama akwisichazi-magama.
Musa ukuthembela ngokupheleleyo kubalinganiswa abakhangeleka ngokufanayo, njenge 3 ngaphandle kwe Kwaye, 5 ngaphandle kwe S, okanye ! ngaphandle kwe 1. Iinkqubo zokuqhekeza igama lokugqitha zinokujonga oku.
Sukuphinda usebenzise iphasiwedi efanayo ngaphakathi kweenguqu ezine ukuya kwezintlanu.
Sebenzisa iiseyile ezikhuselweyo zesikrini. Izikrini ezingatshixwanga ziyindlela elungileyo yokuba iinkqubo zibe sesichengeni nokuba ii-drive zazo ezinzima zibhalwe ngokufihliweyo.
Musa ukwabelana ngamagama okugqitha. Elowo kuye eyakhe!
Gwema ukugcina amagama agqithisiweyo omsebenzisi kwindawo engakhuselekanga esembindini , ezinjenge-spreadsheet esingakhuselekanga kwi-hard drive. Esi sisimemo sentlekele. Sebenzisa iphasiwedi ekhuselekileyo okanye inkqubo efanayo ukugcina iiphasiwedi zomsebenzisi.
Nazi ezinye iindlela zokuchasana negama lokugqitha:
Yenza uphicotho lokhuseleko ukunceda ukubeka esweni kunye nokulandela uhlaselo lwegama eligqithisiweyo.
Vavanya izicelo zakho ukuze uqiniseke ukuba abagcini amagama okugqitha kwimemori okanye ubabhalele kwidiski. Isixhobo esihle soku WinHex .
Gcina iinkqubo zakho zilungelelanisiwe. Amagama agqithisiweyo asetwa ngokutsha okanye abekwa esichengeni ngexesha lokugcwala kwempazamo okanye ezinye iimeko zokwala iinkonzo (DoS).
Zazi ii-ID zakho zomsebenzisi. Ukuba iakhawunti ayikaze isetyenziswe, cima okanye ukhubaze iakhawunti ide ifuneke. Unokumisela iiakhawunti ezingasetyenziswanga ngokuhlolwa ngesandla okanye ngokusebenzisa isixhobo esinjenge Inkunkuma , isixhobo esinokubala inkqubo yokusebenza yeWindows kunye nokuqokelela ii-ID zomsebenzisi kunye nolunye ulwazi.
Njengomlawuli wokhuseleko kumbutho wakho, unako ukwenza Ukutshixelwa kweakhawunti ukunqanda iinzame zokuqhekeka ngegama lokugqitha. Ukutshixwa kwe-akhawunti kukukwazi ukutshixa iiakhawunti zomsebenzisi ixesha elithile emva kokuba inani elithile lokuzama ukungena ngemvume lisilele. Uninzi lweenkqubo ezisebenzayo zinokukwazi.
Sukuyibeka iphantsi kakhulu, kwaye ungayimiseli phezulu kakhulu ukuze unike umsebenzisi okhohlakeleyo ithuba elikhulu lokungena. Indawo ethile phakathi kwe-5 kunye ne-50 inokusebenzela wena. Cinga ngoku kulandelayo xa uqwalasela ukutshixa iakhawunti kwiinkqubo zakho:
Ukusebenzisa i-akhawunti yokutshixa ukukhusela nayiphi na imeko ye-DoS yomsebenzisi, kufuna iiphasiwedi ezimbini ezahlukeneyo, kwaye ungaseti ixesha lokutshixa lokuqala ukuba inqaku liyafumaneka kwinkqubo yakho yokusebenza.
Ukuba uvumela ukuseta ngokuzenzekelayo iakhawunti emva kwexesha elithile- kuhlala kubizwa ngokuba Ukutshixwa komntu ongenayo - musa ukuseta ixesha elifutshane. Imizuzu engamashumi amathathu ihlala isebenza kakuhle.
Ikhonkco lokungena elingaphumelelanga linokunyusa ukhuseleko lwegama eligqithisiweyo kwaye linciphise iziphumo zokutshixwa kwe-akhawunti ukuba ngaba iakhawunti ifumana uhlaselo oluzenzekelayo. Ikhawuntari yokungena inokunyanzela utshintsho lwegama eligqithisiweyo emva kweenzame ezininzi ezingaphumelelanga. Ukuba inani lokuzama ukungena ngemvume aliphumelelanga liphezulu kwaye lenzeke kwithuba elifutshane, iakhawunti inokuba ikhe yafumana uhlaselo lwegama eligqithisiweyo.
Ezinye iindlela zokukhusela iphasiwedi zibandakanya
Iindlela zokuqinisekisa ezinamandla. Imizekelo yoku ngumceli mngeni / impendulo, amakhadi e-smart, amathokheni, ibhayometri, okanye izatifikethi zedijithali.
Ukuseta kwakhona iphasiwedi ngokuzenzekelayo. Lo msebenzi uvumela abasebenzisi ukuba balawule uninzi lweengxaki zabo zegama eligqithisiweyo ngaphandle kokubandakanya abanye. Ngaphandle koko, lo mbandela wenkxaso uyabiza, ngakumbi kwimibutho emikhulu.
Iphasiwedi-khusela i-BIOS yenkqubo. Oku kubaluleke ngakumbi kwiiseva nakwiilaptops ezinokuthi zibe sengozini yokhuseleko lomzimba kunye nokuba sesichengeni.
idosi yeedelsym yabantwana ngokobunzima
alpha-lipoic acid isongezelelo
ukhula lweebhokhwe olucekethekileyo notywala
Umxube we-acetaminophen kunye ne-ibuprofen
Ngaba i-pepto bismol ibangela ilindle elimnyama